Xog laga helay Soomaalida laga soo celiyayy Mareykanka iyo ujeedka ka dambeyb oo la ogaaday – Bandhiga
Soomaali laga soo celiyay Mareykanka oo Muqdisho ka soo dagay iyo sababha ka dambeysa oo la ogaaday
53 qof oo ka kooban 12 qoys ayaa Xamar si qasab ah lagu soo celiyey iyadoo loo diiday Maraykan, soo celintooda waxaa ku heshiiyey Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eretria, waa maxay sababtu?
Isbuucii la soo dhafay Airport ka diyaaradaha ee Aden Cadde waxaa ka soo dagay dad qaxooti Soomaaliyeed ah oo laga kenay wadanka Eretria, dadkan waxaa magan galyo siyay mareykanka sanadkii 2016 kaas oo ay diiday Eretria inay fasaxdo.
Weli lama yaqaan sababta, laakiin wada hadal ay yeesheen Madaxtoyada Somalia, Hay’adda Sirdoonka NISA iyo Madaxweynaha Eritrea ayey ku heshiiyeen in si aan wafaqsaneyn sharciyada Qaxootiga caalamka loogu celiyo Wadankooda, taas oo ah kaliya in qofka qaxootiga ah loogu celin karo kaliya in uu iskiis u go’aansado raalli ahaanshihiisa (Voluntary Return).
Markii la keenay ka dib waxaa la waregay Marwo Amina Said oo ah Guddomiyaha hay’dda qaxootiga Qaranka taas oo geysay meel sir ah una qaybisay lacag dhan $500 qofkiiba, dadkan ayaa tiradooda aheyd 53 qof oo ka farcamay 12 Qoys.
12 kan qoyskan ayaa u qaxay wadanka Eritrea xilligii Maxaakiimta Ismaaliga ee 2006-dii.
Markii ay soo dagayeen ma aysan wadan wax Documents ah oo Immigration ka uu kaga bahnaa, Buuq badan oo ka dhacay Airportka ka dib Hay’dda NISA oo soo dhax gashay ayaa la wareegtay oo Hay’adda Socdaalka ku amartay inaan la hor istaagin dadkaas sida sharci daradda ah Soomaaliya loogu soo celiyey.
Su’aashau waxay tahay dadkan maxay ahaayeen?
Maxaase loo sheegay in Mustaqbalkooda danbe ay ku noolaanaayaan?
Maxaa looga qariyay warbaahinta?
In dadkan lasoo celiyo waxay timid kadib markii uu booqday Eritrea Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo, waxaanse la ogeyn waxa Madaxweyne Farmaajo ku badashay Soomaalidaas loo diiday Maraykanka in loo qaado lacag la’aan iyo kusoo celinta Xamar.
NISA maxaa ka galay Qaxooti?
Madaxweyne Farmaajo muxuu uga badashay Madaxweynaha Eritrea in lasoo celiyo dadkan oo markii horaba loo diiday Maraykanka in loo qaado?
53 qof ee Soomaaliyeed wadankana loogu soo celiyey si baalmarsan Shuruucda Qaxootiga, hadda waxay ku nool yihiin Xamar iyadoo lagu yiri kama hadli kartaan warbaahinta kamana warrami kartaan dhibka la idiin geystay.